Fizahantany any Menabe: Be mpitsidika ny Allée des Baobabs, ny ala Kirindy… | NewsMada
Fizahantany any Menabe: Be mpitsidika ny Allée des Baobabs, ny ala Kirindy…
Miarina tsikelikely izao ny fizahantany any amin’ny faritra Menabe, taorian’ny fanafihana ireo mpizahatany vahiny tany amin’ny kaominina Bekopaka, ny volana jona tamin’ity taona ity, raha ny fanazavana avy ao amin’ny ORT (Office regional de tourisme) Menabe. Fanadihadiana.
Efa misy fepetra noraisina ho fiantohana ny fandriampahalemana, indrindra miainga avy ao Morondava ny ankamaroan’ireo mpizahatany mitsidika ny Tsingy Bemaraha, any amin’ny faritra Melaky. Tato anatin’ny roa volana farany izao, tsy nahitana izay fanafihana izay.
Raha ny ao Menabe, ny Allée des Baobas no be mpitsidika indrindra, ao amin’ny kaominina Bemanonga. Mitantana io Allée des Baobas io ny ONG Fanamby, nanomboka ny taona 2008, miara-miasa aminy ny Fikambanana Fitarihantsoa. Toerana faharoa be mpitsidika ny ala Kirindy, 722 km2, ahitana ireo karazan-javamaniry sy biby tsy fahita any ivelany, toy ny sifaka. Fahatelo be mpitsidika ny Tsingy Bemaraha, any amin’ny faritra Melaky, fa ny ORT Menabe no mandrindra ny fidiran’ny mpizahatany any an-toerana, noho ny fahasarotan’ny fitaterana sy ny tsy fandriampahalemana raha miainga avy any Bongolava miampita mankany Melaky. Fa tsy lavitr’i Morondava ny torapasika Kimony, be mpandeha, madio sy ahitana ala honko arovana.
Araka ny fantatra, raha ny fanazavana avy ao amin’ny ORT Morondava ihany, saika ireo masoivoho misahana ny fitaterana any ivelany mihitsy no mamily lalana ireo mpizahatany tsy ho avy aty Madagasikara, noho izay laza ratsy amin’ny tsy fandriampahalemana izay. Na izany aza, tsy sakana ho an’ny hafa, misy ihany ireo tonga any amin’iny faritra iny, ireo Eoropeanina, ny Frantsay na ny Espaniola fa mitombo isa koa ny Aziatika, toy ny Japoney. Ireo Aziatika ireo anefa, tsy dia lasa lavitra loatra. Tsy vitsy ny teratany amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao.